केही नयाँ नौलो काम गर्ने इच्छा राख्नुभएको छ ? पैसाको अभाव भए यो खबर पढ्नुहोस् ५० लाखसम्म कर्जा पाइने – Halkhabar kura
१८ मंसिर २०७७, बिहीबार ०१:५५
केही नयाँ नौलो काम गर्ने इच्छा राख्नुभएको छ ? पैसाको अभाव भए यो खबर पढ्नुहोस् ५० लाखसम्म कर्जा पाइने
त्यस्तो स्रोतको उपयोग गरेर सिर्जनात्मक काम गर्न सकिनेछ । सरकारले नवप्रवर्तनकारी उद्यम तथा व्यवासय सञ्चालनलाई शुरुआती पूँजी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘नवप्रवर्तन शुरुआती पूँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७’ जारी गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका अनुसार कार्यविधिअनुसार नै शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने मार्ग प्रशस्त भएको उल्लेख गर्दै सिर्जनात्मक काम गर्नेलाई सरकारले साथ दिन लागेको छ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा नवप्रवर्तनका कामलाई अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत कार्यविधिअनुसार कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले तोकेको सदस्य संयोजक रहेको निर्देशक समिति हुनेछ ।
Previous किन चिनियाँ रक्षामन्त्री फेङघे मंसिर १४ गते नेपाल आउदैछन् !